Ny fisorohana ny valanaretina sy ny famerenana amin'ny laoniny ny famokarana-Company News-BURLEY
Ny fisorohana ny valanaretina sy ny famerenana amin'ny laoniny ny famokarana
Views:146 Mpanoratra: Site Editor Fotoana famoahana: 2020-02-05 Origin: Site
Ho setrin'ny valanaretina, ny orinasa dia nandray fepetra maromaro hiantohana ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ary ny famerenana amin'ny laoniny ny famokarana. Hatramin'ny niverenan'ny asa tamin'ny 17 Febroary, nampihatra mafy ny rafitra fisorohana sy fifehezana ny valanaretina ny orinasa. Ho fanampin'ny famonoana otrikaretina sy fanandramana hafanana matetika, dia nandefa mpiasa manokana hisoratra anarana eo am-bavahadin'ny orinasa koa izy, ary hanao fitiliana ny mari-pana sy famonoana tanana sy tongotra ho an'ireo mpiasa miditra sy mivoaka mba hiantohana ny fisorohana sy ny fifehezana ny valanaretina.
Burley koa dia nikarakara ny famerenana ny asa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny governemanta, nifandray tamina mpiasa, ary nitantana ny karatra fandefasana rehetra ho an'ireo mpiasa hanampiana azy ireo hiverina amin'ny orinasa milamina. Mandritra izany fotoana izany dia omena karama mifanaraka amin'ny rafitry ny orinasa ny mpiasan'ny orinasa na manao adidy na mitokana izy ireo. Nomena efitrano sy birao iray volana maimaimpoana ireo mpiasa miasa, ary novaina avy amin'ny vary sy sakafo tsy misy fangarony lasa boaty, izay angonin'ny atrikasa sy departemanta rehetra.
Amin'izao fotoana izao, ny isan'ny mpiasa miverina amin'ny orinasa dia nahatratra 60%, ary ny ankamaroan'ny atrikasa famokarana dia nanohy ny famokarana. Ny famokarana ny orinasa dia miankina indrindra amin'ny baiko napetraka talohan'ny firohotana, ary tombanana fa ny fahaizan'ny famokarana teo aloha dia haverina amin'ny 25 febily ho avy izao.